Paris-St Germain oo ku war galisay Real Madrid qiimaha ay kaga iibineyso Edinson Cavani – Gool FM
Paris-St Germain oo ku war galisay Real Madrid qiimaha ay kaga iibineyso Edinson Cavani
(PSG) 25 Luulyo 2018. Maamulka kooxda Real Madrid ayaa waxay diyaarinayaan qiimaha rasmiga ah ku doonayaan in Paris-St Germain ay kala soo saxiixdaan weeraryahanka Edinson Cavani inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Shabakada “Sport Mediaset” ayaa waxay shaaca ka qaaday in xidiga kooxda Paris-St Germain ee Edinson Cavani uu kusii dhawaanayo ku biirista kooxda Real Madrid inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
31 jirkan reer Uruguay ayaa lagu soo waramayaa in mushaar ahaan uu u qaadan doono 10 milyan euro sanadkii, xili Paris-St Germain ay ku doonayso xidigeedan aduun dhan 58 milyan euro.
Si kastaba Real Madrid ayaa ku dhibtooneysa inay lasoo saxiixato Neymar Jr si ay kaga dhigato badalka Cristiano Ronaldo oo kaga biiray kooxda Juventus, taasoo ka dhigtay in ay ku fikirto markale saxiixa Edinson Cavani.
“Cristiano Ronaldo wuxuu door biday loolan cuub, wax walwal ahna kama qabo Diego Godín”…. Diego Simeone